नक्शा डाउनलोड गर्नुहोस् र BBBike - Geofumadas प्रयोग गरेर एउटा मार्ग योजना गर्नुहोस्
नक्शाहरू डाउनलोड गर्नुहोस् र BBBike को प्रयोग गरेर मार्ग योजना गर्नुहोस्
डिसेम्बर, 2017 गुगल अर्थ / नक्सा
BBBike एउटा अनुप्रयोग हो जसको मुख्य उद्देश्य एक सडक योजनाकार प्रदान गर्न, एक साइकल प्रयोग गरेर शहर र यसको वरिपरि।
हामी कसरी हाम्रो मार्ग योजनाकार बनाउन सक्छौं?
प्रभावमा, यदि हामी तपाईंको साइट प्रविष्ट गर्दछौं वेब, हामीलाई देखाइएको पहिलो कुरा विभिन्न शहरहरूको नामहरूसँग एक सूची हो, जसबाट माउसहरू मार्फत यी मध्ये एक छान्न सम्भव छ।
तपाईले देख्न सक्नु भएको छ, छनौट गर्न शहरहरूको सूची देखिन्छ। ती मध्ये एक चयन गर्दा हामी नयाँ स्क्रिनमा प्रवेश गर्दछौं जसले हामीलाई हाम्रो मार्ग परिभाषित गर्न दिन्छ। मानौं हामीले लन्डन (लन्डन) रोज्यौं।
एकपटक मार्ग परिभाषित भएपछि, आवश्यक डेटाको साथ एक रिपोर्ट प्राप्त छ:
टिप: ध्यान दिनुहोस् कि माथिको मुख्य विन्डो एक हरियो लिंक प्रकट हुन्छ, जसको माध्यमबाट "केहि" kml ढाँचामा डाउनलोड गरिन्छ, के यो हुनेछ?
BBBike कसरी प्रस्तुत छ?
तिनीहरूले हामीलाई उपलब्ध छन् भनेर बताउँछन् दुईवटा संस्करणहरू BBBike को, "वेब आधारित", (हामी एक देखिरहेको छ) र "स्वत:" डाउनलोड गर्न। पछिल्लो अवस्थामा, यो पढ्न उपयुक्त छ कागजातहरू जुन विकल्पमा क्लिक गरेर पहुँच गर्न सकिन्छ "मदत"मुख्य सञ्झ्यालको तलल्लो बायाँ कुनामा अवस्थित मेनुबाट:
त्यहाँ मोबाइल संस्करण पनि छ, तर, हामी दोहोरिन्छौं, यो पढ्न योग्य छ कागजातहरू पहिले।
बीबीबीईको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू के हो?
बाट रेकर्ड गरिएको के बाट कागजातहरू, हामी हाइलाइट गर्दछौं:
संसारभरका 200 भन्दा बढी शहरहरू समावेश छन्।
17 नक्सा प्रकारहरू भन्दा फरक समर्थन गर्दछ (विभिन्न तहहरूसँग) OpenStreetMap, गुगल, र बिंग।
जीपीएक्स वा KML जस्ता GPS मार्गहरू निर्यात गर्ने सम्भावना
रिपोर्टहरू पीडीएफ ढाँचामा मुद्रित वा मोबाइल फोनमा भण्डार गरिएको
OpenStreetMap साप्ताहिक बाट डेटाको अद्यावधिक।
BBBike के हो?
BBNike को छोटो दूरी को लागि,5र लगभग 15 किमी को बीच मार्ग को निर्माण को लागि विकसित गरिएको छ, जसको उपयोगिता मोटर सवारी को लागि छ। होइन यो उत्साह वा चक्रको लागि सहायताको लागी हो।
बीबीबीईले कुन उपकरणहरू बनाउँछ?
यदि हामी विकल्प छनौट गर्छौं "उपकरण"मुख्य मेनुबाट, हामी नयाँ स्क्रिनमा प्रवेश गर्दछौं जसले यस अनुप्रयोगलाई उपकरणहरू सूचीबद्ध गर्दछ:
हामी ठूला स्ट्रोकमा, उपकरणको बारेमा जानकारीलाई रूपरेखा गर्नेछौं:
a) BBBike अनुप्रयोग
यो तथाकथित "स्वतन्त्र संस्करण" डाउनलोड गर्न अर्को तरिका हो। हामी संकेतहरूलाई ध्यान दिन्छौं र शहरहरूको लागि कसरी हेर्छौं। यदि हामीले 'स्वतन्त्र संस्करण' डाउनलोड र स्थापना गर्यौं भने हामी यो केहि प्राप्त गर्नेछौं। त्यहाँ दुई भाषाहरू उपलब्ध छन्: जर्मन र अंग्रेजी।
La कागजातहरू यसले हामीलाई दुई आज्ञाहरू पनि देखाउँछ जुन हामी सन्दर्भमा निर्भर गर्न सक्छौं:
बी) टाई सर्भर टाइल सर्भर
तपाईंको आफ्नै फोटो मोजिक सर्भर चलाउनुहोस्। देखाईएको नक्सा शैलीमा उपलब्ध छ mapnik। यो एक अनुप्रयोग हो जसले नक्साहरूलाई राम्रो छवि गुणस्तरको साथमा उनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्न छिटो म्यापिङ एल्गोरिदम प्रयोग गरी भिजुअल बनाउन अनुमति दिन्छ।
c) नक्शा तुलना गर्नुहोस्
यो उपकरण द्वारा सिर्जना गरिएको थियो Geofabrik। यो उपकरणको नवीनतम संस्करण स्क्रिनमा 52 नक्साहरू साथै पूर्ण पर्दा मोडमा समर्थन गर्दछ।
घ) OpenStreetMap सेवा हटाइयो
यसले एक्सटेन्सन क्षेत्रहरू जसको अधिकतम साइज 960,000 km2 हो, जुन 1200 मिटरको लगभग 800 किलोमिटरको आयताकार क्षेत्र हो। जब हामी पहिलो पटक प्रवेश गर्छौं, यसले हामीलाई कसरी यो उपकरण प्रयोग गर्ने सानो ट्युटर देखाउँदछ:
यहाँ हामी केही अवलोकन गर्न सक्छौं:
इच्छित स्थान। विषयको क्रिम। ठीक छ, जस्तो कि तपाईं हेर्न सक्नुहुनेछ, नक्सामा प्रदर्शित नक्सा पूर्वनिर्धारित रूपमा बर्लिन र यसको वरपरको ठाउँ हो। यदि हामी अर्को शहर चाहन्छौं भने नि? कुञ्जी बटनमा छ "अक्षांश र देशान्तर बाकस देखाउनुहोस्":
कुन, सक्रिय हुँदा, इच्छित बाकस देखाउँछ:
उपलब्ध ढाँचाहरू। ध्यानपूर्वक ड्रप-डाउन सूची हेर्नुहोस्। यहाँ किलोमिटर ढाँचा देखा पर्दैन। यसलाई खातामा लिनु ...:
ड्यूमिम्सको लागि टिप्स। घटनामा जहाँ तपाईं नक्सा निकाल्न चाहानुहुन्छ स्थानका निर्देशांकहरू ज्ञात हुँदैनन्, कि त तपाईं एक निरपेक्ष दीक्षाको रूपमा हुनुहुन्छ, वा किनभने तपाईं एक अनियमित स्थानको बारे सोच्नुभएको छ जुन तपाईंलाई थाहा छैन, यो आधारभूत चरणहरू हुनेछन्:
- Google को साथ तपाईले काम गर्नुहुने स्थानको समकक्षहरु खोज्नुहोस्।
- यो अधिवेशन हो कि तपाईं अक्षांश र देशान्तर मूल्यहरु को साथ तपाईंको साथ साइन इन गर्नुहोस् (यदि उहाँसँग छ) र एक्लो दशमलव बिन्दु संग। मिनेट र सेकेन्डका साथ मानहरू प्रयोग नगर्नुहोस्। पहिलो मानहरू (बायाँ-निचो) मा दुई मानहरू प्रविष्ट गर्नुहोस् र दोस्रो मानमा प्रविष्ट गर्नका लागि पहिलो दशमलव स्थानमा "1" वा "2" घटाउनुहोस् (दाँया-शीर्ष कुना)
- कार्यक्रम द्वारा प्रदान गरिएको ट्यूटोरियल चरणहरूको पालना गर्नुहोस् (माथि रेखाहरू हेर्नुहोस्)। एक क्षण पछि, डाउनलोडको लिङ्क तपाईंको ई-मेल खातामा पुग्यो। द्रुत उदाहरण:
बीबीबीइकमा: तपाईलाई मात्र प्रयोग गर्न को लागी "समायोजित" को आवश्यकता छ:
- बटन थिच्नुहोस् "निकाल्ने"र तयार छ!
e) planet.osm दर्पण
El डाउनलोड साइट BBBike XML OSM ढाँचा र बाइनरी प्रोटोकलबफर ढाँचामा OpenStreetMap पूर्ण ग्रह को एक डाटाबेस प्रदान गर्दछ। यसमा 200 शहरहरू र विश्वभरका क्षेत्रहरु भन्दा बढि बाट निकाहरू समावेश गर्दछ।
यी ठूला स्ट्रोकहरूमा, BBBike को बारेमा जानकारी। यदि तपाइँ यसलाई प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ भने, "स्वतन्त्र" संस्करण डाउनलोड गर्न संकोच नगर्नुहोस् वेब अनुप्रयोगको। अर्को पटक हेर्नुहोस्!
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो के हामीले "जियोमेटिक्स" शब्द बदल्नु पर्छ?
अर्को पोस्ट नयाँ BIM प्रकाशन: साधारण भाषामा BIMअर्को »